Madaxweyne Ku-Xigeennada Barnaamijyada
Kara Inae Carlisle wuxuu ku biiray McKnight 2017 isagoo ah madaxweyne ku xigeenka barnaamijyada. Doorkaas, waxay horseedday isbeddelka istaraatiijiyadda barnaamijka iyo barashada-ka-jawaabista xaaladda degdegga ah ee isbeddelka bulshada, iyo hubinta in falanqaynta jinsiyadda, sinnaanta, iyo dimoqraadiyadda ay hoosta ka xariiqayso dhammaan xeeladaha barnaamijka. Iyadoo hoggaankeeda, barnaamijyada Aasaaska maanta waxay ka tarjumayaan diiradda iyo isdhexgalka, iyo u heellanaanta sinaanta iyo waaritaanka.
Markii hore, Carlisle waxay siddeed sano ku qaadatay WK Kellogg Foundation ee Battle Creek, Michigan, ugu dambeyntiina wuxuu ahaa agaasimaha barnaamijyada New Mexico. Waxay sidoo kale u adeegtay kooxda Kellogg ee madaniga ah iyo ka-qaybgalka samafalka, iyada oo horumarinaysa buug-gacmeedka ugu horreeya ee lagu wargelinayo qaabkeeda deeq-bixinta ku salaysan.
Horaantii shaqadeeda, Carlisle waxa ay jagooyin kala duwan ka qabatay Los Angeles, oo ay ku jiraan agaasime ku xigeenka Zócalo Public Square, iyo agaasimaha xidhiidhka dadweynaha iyo agaasimaha xarunta xallinta khilaafaadka ee 4.29 ee Isbahaysiga Ameerikaanka Kuuriya. Waxay u soo shaqeysay madaxweeyne ka tirsan Guddiga Xidhiidhka Aadanaha ee Magaalada Los Angeles iyo sidii guddoomiyaha Koongareeska Awood-siinta. Waxay ahayd xubin guddi oo ka tirsan Ururka Qaranka ee Dhexdhexaadinta Bulshada ee Washington, DC, iyo Deeq-bixiye dhawaan Hogaamiyaasha Isbeddelka Ururada Waxtarka leh ee Fellow Fellow.
Xubin ka ah guddiga hadda ee Magaalooyinka Nolosha iyo Xarunta Qaranka ee Samafalka Qoyska, Carlisle sidoo kale waa guddoomiye ku xigeenka guddiga iyo xoghayaha Samafalka ee Ka-qaybgalka Firfircoon ee Bulshada. Waxay u adeegtaa Xarunta La-talinta Deeq-wax-ku-oolnimada leh, iyo magacaabista Guddoomiye Walz ee Golaha Fulinta ee Hindisaha Haweenka Dhallinyarada ah ee Minnesota.
Carlisle waxa ay MBA ka haysataa Dugsiga Maareynta Kellogg ee Jaamacadda Waqooyi-galbeed iyo MDiv ee daraasaadka iyo waxbarashada magaalooyinka Claremont School of Theology.
Soo Degso Sawirka Sawirka
Dhaqdhaqaaqyada McKnight si ay u kaxeeyaan sinnaanta ee Grantmaking
By Kara Inae Carlisle, Stephanie Duffy, Na Eng Noofambar 2021
By Kara Inae Carlisle March 2019
Tallaabooyinka xiga ee ku saabsan DEI: Uruurinta Xogta Wanaagsan ee Saameynta Badan